Cuntada badda Mediterranean-ka maxay tahay iyo faa'iidooyinkeedu? | Cuntada Nutri
Cuntada badda Mediterranean
Xaqiiqdii waxaad maqashay malaayiin jeer, la hadal nafaqada iyo dhakhaatiirta dalkan faa iidooyinka badan ee uu leeyahay Cuntada badda Mediterranean caafimaadka iyo jirka. Cuntada badda Mediterranean-ka waxay soo jirtay dhowr qarniyo waana waana hab caafimaad leh ee quudinta in dhammaan magaalooyinka aagga badda Mediterranean ay raacaan.
Waxaa jira dalal badan oo raaca cunnadan: Spain, Italy, Cyprus, Greece or Portugal. Marka xigta wax yar ayaan idiinka sheegayaa wax ku saabsan cuntadan caafimaadka u leh jidhka oo aanad seegi karin cuntadaada maalinlaha ah.
1 Astaamaha lagu garto cuntada badda Mediterranean
2 Faa'iidooyinka cuntada Mediterranean
3 Dhibaatooyinka hadda jira ee cuntada Mediterranean
4 Khatar ku timaadda cuntada Mediterranean-ka oo baaba'aya
Astaamaha lagu garto cuntada badda Mediterranean
Ma jiro hal cunto oo Mediterranean ah, waxaa jira noocyo badan nooca noocan ah maxaa yeelay dalal badan ayaa raaca nooca noocan ah. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan kala duwanaansho iyo waxyaabo gaar ah, cuntada Mediterranean ayaa leh taxane ah muuqaalada guud iyo inay wadaagaan dhamaan wadamada.
Cunsurka ugu weyn ee cuntada Mediterranean-ka waa saliida saytuunka.
Isticmaal dhexdhexaad ah waqtiga qadada.
Alimentos sare ee fiber sida ku dhacda miraha, khudaarta iyo digiraha. Saladyada waa inay goobjoog ka ahaadaan dhammaan cuntooyinka. Waxaa ugu fiican in la cuno illaa 3 xabbo oo miro ah maalintii oo la qaato khudradda laba ama saddex jeer usbuucii.
Marka ay timaado karinta, sharaxaadda saxamada waa kuwo fudud oo aad u taxaddar badan.
Cuntada noocan ah, waxaa ku yar cunitaanka cuntooyinka hodanka ku ah borotiinka, sida hilibka cas. Taas bedelkeeda, haddii ay jirto jiritaan cayiman kalluunka ama digaagga.
Aad bay u badan tahay in la isticmaalo alaabada sida basasha iyo toonta oo u isticmaal saldhig ahaan diyaarinta suxuunta kala duwan.
Waxaa jira dhadhan gaar ah Liinta iyo iyadoo ay ugu wacan tahay dhadhanka aashitada leh sida khalka ama liinta, oo labaduba aad loogu isticmaalo suxuunta xilli sida saladhka.
Cunnooyinka cunnooyinka badda Mediterranean-ka waxaa badanaa lala socdaa hal koob oo khamri Rioja ah.
Marka la diyaarinayo suxuunta iyo cuntooyinka kala geddisan, dhammaan noocyada alaabooyinka cusub waxaa badanaa la isticmaalaa, sida khudaarta, kalluunka ama miraha.
Isticmaalka bariis iyo baastada noocyada cuntada ah badanaa wey sarreeyaan, gaar ahaan qiyaastii 3 ama 4 jeer usbuucii.
Taasi waa sababta halkii looga hadli lahaa cuntada badda Mediterranean-ka oo keliya, waa in loo sameeyaa si ka saxsan sidii loogu talagalay nolosha badda dhexe, Maaddaama in ka badan hab cuniddu ay tahay hab nololeed leh taxane caadooyin aad u gaar ah sida seexashada ka dib cunista.
Faa'iidooyinka cuntada Mediterranean
Cuntada Mediterranean ayaa bixisa faa iidooyin caafimaad oo badanIskusoo wada duuboo, waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato cudurada wadnaha iyo kahortaga halista qaadida nooc ka mid ah kansarka. Si aan ku filneyn, faa'iidooyinkan waxaa lagu yaqaanay sannado yar, gaar ahaan waxay ahayd 60-meeyadii kadib daraasad ay samaysay Nederland.
Daraasaddan ayaa daaha ka rogtay farqiga weyn ee u dhexeeyay tirada dhimashada ee ay sababtay cudurada wadnaha la xiriira dalal ay ka mid yihiin Mareykanka oo leh waddamo kale sida Griiga. Farqigaas ayaa sabab u ahaa nooca cuntada iyo qaab nololeedkii ay bulsho walba ku hogaaminaysay. Daraasaddan ka dib, waa la aqoonsaday faa'iidooyinka badan in jidhku leeyahay cunto ku saleysan cuntada Mediterranean.
Dhibaatooyinka hadda jira ee cuntada Mediterranean
Hadda Cuntada badda Mediterranean ma laha muhiimadda ay leedahay dhowr sano ka hor waxaana ku barakacay nooc kale oo cunto ah sharraxaad yar iyo caafimaad yar jirka. Saacadaha shaqada ee dheer iyo ku darista haweenka ee suuqa shaqada waxay keeneen xulasho wanaagsan nooc ka mid ah cunto sooman. Hadda waa qaybinta ballaaran iyo silsiladaha cuntada in suuqa xukuma markaa waxaa jira noocyo badan oo badeecooyin ah oo la cuno.
Dhammaan arrimahan ayaa sababay Cuntada badda Mediterranean waxaa ku barakacay cuntada Anglo-Saxon ee taajir ka ah dufanka xoolaha oo aad uga caafimaad iyo waxtar badan jirka marka loo eego cuntada badda Mediterranean.
Khatar ku timaadda cuntada Mediterranean-ka oo baaba'aya
In kasta oo horudhac laga helay sanadihii ugu dambeeyay wadankeena nooc cunto ah sida Anglo-Saxon iyada oo ku saleysan sharraxaad yar ee cuntada iyo jiritaanka badan ee dufanka noocyada xoolaha ah, inyarba ha ahaatee waxaa bilaabmaya wacyi gelin bulshada inteeda badan cunto aad u caafimaad badan oo dufan yar oo faa iidooyin badan u leh jirka.
Inta badan khubarada nafaqada iyo takhasusleyda waddankeenna waxay tilmaameen inay aad muhiim u tahay in la raaco cunto sida badda dhexe si looga hortago cudurada wadnaha ee suurtogalka ah, had iyo jeerna midaysan horumarka maalinlaha ah ee jimicsi yar ama jimicsi jireed. Iyada oo labadan walxood ay aad u fududdahay una fududahay in la waafajiyo, khubarada ayaa taas xaqiijinaya miisaanka qofka ayaa ku filnaan doona Mana jiri doonto nooc culeysyo miisaan saa'id ah.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la dhiirrigeliyo dadka da'da yar, dhadhanka cunno aad u fara badan oo la sharaxay sida badda Mediterranean iyadoo lagu saleynayo cunnooyinka u caafimaad qaba sida miraha iyo khudradda, taasi waxay ka caawinaysaa inay ku noolaadaan nolol caafimaad qabta oo fog dufan aad u xun jirka.
Sanadihii ugu dambeeyey, kooxaha siyaasadeed ee ka socda Golaha Guurtida waxay muujiyeen muhiimada ay leedahay kor u qaadida nooc ka mid ah cuntada sida badda Mediterranean sida ugu macquulsan faa'iidooyinka aan la tirin karin in ay siiso noolaha. Sababtaas darteed iyo ku lug lahaanshaha sii kordheysa ee hoggaamiyeyaasha Isbaanishka iyo warbaahinta kala duwan, ma jirto nooc khatar ah hadda taas Cuntada badda Mediterranean waxaa laga yaabaa in laga waayo cuntada Isbaanishka.
Kadib waxaan kaaga tegayaa fiidiyoow ay ku sharxan yihiin faa iidooyinka badan in cuntada Mediterranean-ka wax ku kordhiso jirka iyo caafimaadka qofka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cuntada badda Mediterranean
Macluumaad aan caadi ahayn oo ku saabsan kafee
Cun cuntooyinkan habeenkii si aad si fiican u seexato